क्यान्सर भनेको के हो ? यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
क्यान्सर भनेको के हो ? यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ ?
Posted by Chintan | २८ माघ २०७५, सोमबार १२:१४ |
नेपालमा पनि क्यान्सरका कारण धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ। कस्ता व्यक्ति क्यान्सरको जोखिममा छन् ? यसबाट बच्ने उपाय के हो ? भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल अन्कोलोजिस्ट डा. कमलराज सोतीसँग गरेको कुराकानीः
यो सेवामा लागेको कति वर्ष भयो ?
१४ वर्ष भयो। वीर अस्प्ताल, पाटन अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र अलइन्डिया मेकिडलमा काम गर्दै डक्टर इन अन्कोलोजिस्ट गरेको हुँ।
शरीरमा कोषहरू हुन्छन्। कोष आफैं बन्दै–मर्दै गरिरहेका हुन्छन्। त्यही कोष अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि हुने अवस्थालाई क्यान्सर भनिन्छ।
कोष अनियन्त्रित बनाउने तत्वहरू के–के हुन् त ?
शरीरमा नदेखिने जिन हुन्छ। त्यो जिन यसरी बनेको हुन्छ कि कोषलाई एकनासले काम गर्न दिँदैन। विभिन्न कोषमा ‘म्युटेसन’ भयो भने कोष रोकिँदैन र अनियन्त्रित रूपमा बढ्छ। विभिन्न विकिरण जुन एक्सरे, अणु बमबाट निस्कन्छन्। यी विकिरणबाट पनि कोषहरूमा प्रभाव परेमा कोष वृद्धि हुन थाल्छ। कतिपय अवस्थामा वंशाणुगत कारणले पनि क्यान्सर सर्छ। हाम्रो खानपान एवं भाइरसबाट पनि सर्छ। कतिपयलाई दुर्घटनावश आफैं क्यान्सर उत्पन्न हुन सक्छ।
क्यान्सर गराउने कारक तत्वहरू के–के हुन् ?
पहिलो कारण हो, धूमपान एवं सुर्तिजन्य पदार्थ खानु। यस्तै शरीरमा आउने हर्मोनको परिवर्तन, मोटोपना, विकिरण, खानपान, धूवाँ, रासायनिक तथा वातवरणीय प्रदूषण सबै क्यान्सरका कारक तत्व हुन्।
रक्सी, धुमपान प्रयोगले स्तन, पाठेघर तथा ठूलो आन्द्राको क्यान्सर गराउँछ। मोटा मानिसमा पनि यो क्यान्सर बढी हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले वायुमा पार्टिकुलर म्याटर (पिएम) २० देखि ४० भन्दा बढी हुनु हुँदैन। तर हाम्रो सहरको हावामा १ सय २० भन्दा बढी पिएम भेटिन्छ। यसको असर अवश्य परेको हुन्छ। पछि गएर नयाँ पुस्तामा क्यान्सर बढ्ने सम्भावना बढी छ।
नेपालमा कुन– कुन क्यान्सर बढिरहेका छन् ?
अहिले नेपालमा फोक्सो, पाठेघरको मुखको, स्तन, पित्तथैली र पेटको क्यान्सर सबैभन्दा बढी देखिन्छ । यसमा पनि पुरुष र महिलामा हुने क्यान्सर फरक छन्। पुरुषमा फोक्सोको र महिलामा पाठेघरको मुखको र स्तन क्यान्सर बढी देखिन्छ। त्यसैगरी ओंठ, मुख, घाँटी र टाउकोको क्यान्सर पनि पुरुषमा बढी देखिन्छ। त्यसपछि प्रोस्टेट र ठूलो आन्द्राको क्यान्सर पनि देखिन्छ।
कुन्–कुन् कारणले क्यान्सर बढ्छ ?
मुख्य कारण, सुर्तिजन्य पदार्थको अम्मल नै हो। नेपालमा महिलाका तुलनामा पुरुषहरू बढी धूमपान गर्छन्। ‘ह्युमन पेपिलोमा’ भाइरसले जिब्रो, मुख, ओंठमा पनि क्यान्सर गराउँछ। यो भाइरसले मलद्वार, पाठेघरको मुखमा पनि क्यान्सर गराउँछ। त्यसैगरी हेपाटाइटिस बी र सीले कलेजोको क्यान्सर हुन सक्छ। रातो मासु, पोलेका तथा ढुसीपरेका खानेकुराले पेटको क्यान्सर हुन्छ। यस्ता खानेकुरा लामो समय प्रयोग गरेमा पेटको क्यान्सर हुन्छ।
नेपालमा क्यान्सर रोगी कति छन् ?
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा क्यान्सर रोगी ४५ हजार जना छन्।
Previousनृत्य प्रस्तुत गर्दै विद्यार्थी
Nextराजसंस्थाको एजेण्डा बोकेको पार्टी पटक–पटक सरकारमा गएको नागरिकले मन पराएनन्
सफल सेक्स: ‘आफ्नो श्रीमानलाई यस्ता खानेकुरा खुवाएर उत्तेजित गराउनुहोस’
६ मंसिर २०७३, सोमबार ११:५२
बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर अस्पतालबाट क्यान्सरको सहज उपचार
४ कार्तिक २०७५, आईतवार १०:४०
१८ भाद्र २०७४, आईतवार ०९:२८